ထောင်ထဲမှာပဲ ကြီးပြင်းသွားရမယ့် ဆယ်ကျော်သက်များ - For her Myanmar
သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေက သူတို့အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် ကြီးလေးနေတော့ ..
ဆယ်ကျော်သက်ဘဝဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာ ရင်ခုန်စရာအကောင်းဆုံး အချိန်ဆိုရင်လည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ ဆယ်ကျော်သက်ကာလမှာ ပျော်စရာတွေ၊ အမှတ်တရတွေ၊ ရင်ခုန်စရာတွေ တော်တော်များများကို ဖြတ်သန်းရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အများလိုမဟုတ်ဘဲ သူတို့ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကာလ အပါအဝင် တစ်ဘဝလုံးကို ထောင်ရဲ့သံတိုင်တွေနောက်မှာ ကုန်ဆုံးသွားရမယ့် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လေးတွေရှိနေပါတယ်။
သူတို့တွေက ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့လို့ ဒီလိုအပြစ်ဒဏ်ကိုခံစားရတာလဲဆိုတာ စူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့..
၁။ T. J. Lane
T. J. Lane ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးဟာ အသက် ၁၇ နှစ်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ သူတက်နေတဲ့အထက်တန်းကျောင်းရဲ့ မုန့်ဈေးတန်းထဲကို သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် ကျောင်းသား (၃)ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး အခြားကျောင်းသား (၃) ယောက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို သေနတ်နဲ့ ပစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ အမျိုးမျိုး ပြောကြတာပါပဲ။ တချို့ကလည်း သူ့အရင်ကောင်မလေးနဲ့ တွဲနေတဲ့ တစ်ယောက်ကို ပစ်ရင်း ကျန်တဲ့သူတွေပါ ထိသွားသလို ဆိုကြသလို တချို့ကျတော့လည်း သူဟာ စိတ်ဝေဒနာရှင်ဖြစ်နေတာမို့ ဒီလို ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပြန်ပါတယ်။
တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ သူ့ကို ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုစီရင်ချက်ချတဲ့အမိန့်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ချိန်မှာ သူဟာ ထီမထင်တဲ့ဟန်နဲ့ ပြုံးရယ်နေခဲ့သလို ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အမူအရာတွေ လုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၁၉ နှစ်မှာ ထောင်ကျခဲ့တဲ့ T.J Lane ဟာ အခုဆိုရင် အသက် ၂၃ ဝန်းကျင်ရှိနေပါပြီ။
Related Article >>> ဟောလိုးဝင်းညရဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် လူသတ်မှု
၂။ Nicholas Lindsey
ဒီလူငယ်လေးကတော့ သူ့အသက် ၁၆ နှစ်မှာ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ကို သေနတ်နဲ့ အသေပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ယခင်ကတည်းက ခိုးမှု၊ လုယက်မှု အသေးစားလေးတွေ ကျုးလွန်ခဲ့ဖူးသူပါ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ကားတစ်စီးကို ခိုးယူဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက သံသယရှိတာကြောင့် သူ့ကို စစ်ဆေးဖို့ ကြိုးစားစဉ်မှာ သူက သေနတ်နဲ့ ခုခံပစ်ခတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာတော့ ဒီပြစ်မှုကြောင့် သူ့ကို ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်း ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ရှေ့နေက သူ့ရဲ့အပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ခံရဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ မအောင်မြင်ပါဘူး။ Nicholas Lindsey လက်ရှိမှာ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Antonio Barbeau, Nathan Paape
ဒီ ဆယ်ကျော်သက် နှစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်ရင်တော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးတွေလို့ အများက ယူဆကြမှာပါ။ တကယ်တော့ သူတို့ဟာ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ရက်စက်တဲ့ပြစ်မှုကြီးတစ်ခု ကျူးလွန်ထားကြတဲ့ လူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ သူတို့နှစ်ဦးဟာ Antonio ရဲ့ အသက် ၇၈ နှစ်အရွယ်အဖွားဖြစ်သူကို ရဲဒင်းတွေ၊ တူတွေ နဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှက်ခုတ်ထစ်ကာ သတ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အဘွားဆီက လက်ဝတ်ရတနာတွေနဲ့ ပိုက်ဆံတွေလိုချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ရက်အကြာမှ ရဲတွေက သူတို့နှစ်ယောက်သတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကို ဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကို တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> ရုပ်ရှင်ကားတွေ နမူနာယူရိုက်ကူးခံရတဲ့ စိတ္တဇလူသတ်သမား အက်ဒ်ဂိန်း
၄။ Jacob Mouzon, Drake Campbell
Jacob Mouzon, Drake Campbell
သူတို့ နှစ်ဦးကတော့ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် Kenneth Campbell နဲ့အတူ အိမ်တစ်အိမ်ထဲ ဝင်ရောက်ကာ လူငယ်တစ်ဦးကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ အသတ်ခံရတဲ့လူငယ် (Kadeem Johnson) ရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးကလည်း အတူရှိနေပြီး ဒီကောင်မလေးကိုတော့ ရင်ဘတ်နဲ့ လက်မှာ သေနတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ ထွက်ချက်အရတော့ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ လူငယ်တွေဟာ သူတို့ဆီက ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့တကွ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ကို လုယက်သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ချိန်မှာ Jacob Mouzon ရဲ့ အသက်က ၁၇နှစ် ဖြစ်ပြီး Drake Campbell ရဲ့ အသက်ကတော့ ၁၈ နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြစ်မှုအတွက် Kenneth Campbell ကို ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကျွန်း၊ Jacob Mouzon ကို ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၄၀ နဲ့ Drake Campbell ကို ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလူငယ်တွေ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေက ကြီးလေးပါတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့သာ အရွယ်ရောက်ပြီးသားဖြစ်နေရင် သေဒဏ်ချမှတ်ခံရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအရ တရားခံဟာ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ဆိုရင် သေဒဏ်ပေးလို့မရတာကြောင့် ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်ခံရတာပါ။
စိတ်မကောင်းစရာတွေပေမဲ့လည်း သူတို့အသက်အရွယ်နဲ့ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်….
References : huffingtonpost, live5news, tampabay
သူတို့ကြူးလှနျခဲ့တဲ့ ပွဈမှုတှကေ သူတို့အသကျအရှယျနဲ့ မလိုကျအောငျ ကွီးလေးနတေော့ ..
ဆယျကြျောသကျဘဝဆိုတာ လူတဈယောကျရဲ့ဘဝမှာ ရငျခုနျစရာအကောငျးဆုံး အခြိနျဆိုရငျလညျး မှားမယျမထငျပါဘူးနျော။ ဆယျကြျောသကျကာလမှာ ပြျောစရာတှေ၊ အမှတျတရတှေ၊ ရငျခုနျစရာတှေ တျောတျောမြားမြားကို ဖွတျသနျးရတာပေါ့။ ဒါပမေဲ့ အမြားလိုမဟုတျဘဲ သူတို့ရဲ့ ဆယျကြျောသကျကာလ အပါအဝငျ တဈဘဝလုံးကို ထောငျရဲ့သံတိုငျတှနေောကျမှာ ကုနျဆုံးသှားရမယျ့ ဆယျကြျောသကျလူငယျလေးတှရှေိနပေါတယျ။
သူတို့တှကေ ဘယျသူတှလေဲဆိုတာနဲ့ ဘယျလိုပွဈမှုတှကြေူးလှနျခဲ့လို့ ဒီလိုအပွဈဒဏျကိုခံစားရတာလဲဆိုတာ စူးစမျးကွညျ့မယျဆိုရငျတော့..
T. J. Lane ဆိုတဲ့ လူငယျလေးဟာ အသကျ ၁၇ နှဈ၊ ၂၀၁၂ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလမှာ သူတကျနတေဲ့အထကျတနျးကြောငျးရဲ့ မုနျ့ဈေးတနျးထဲကို သနေတျနဲ့ပဈခတျခဲ့တာကွောငျ့ ကြောငျးသား (၃)ယောကျသဆေုံးခဲ့ပွီး အခွားကြောငျးသား (၃) ယောကျ ဒဏျရာရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို သနေတျနဲ့ ပဈရတဲ့ အကွောငျးရငျးကတော့ အမြိုးမြိုး ပွောကွတာပါပဲ။ တခြို့ကလညျး သူ့အရငျကောငျမလေးနဲ့ တှဲနတေဲ့ တဈယောကျကို ပဈရငျး ကနျြတဲ့သူတှပေါ ထိသှားသလို ဆိုကွသလို တခြို့ကတြော့လညျး သူဟာ စိတျဝဒေနာရှငျဖွဈနတောမို့ ဒီလို ပဈခတျခဲ့တယျလို့ ဆိုကွပွနျပါတယျ။
တရားရုံးမှာ စဈဆေးမေးမွနျးမှုတှပွေုလုပျပွီးတဲ့နောကျ ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာတော့ သူ့ကို ထောငျဒဏျတဈသကျတဈကြှနျးခမြှတျခဲ့ပါတယျ။ သူ့ကိုစီရငျခကျြခတြဲ့အမိနျ့ထှကျပျေါလာခဲ့ခြိနျမှာ သူဟာ ထီမထငျတဲ့ဟနျနဲ့ ပွုံးရယျနခေဲ့သလို ရိုငျးစိုငျးတဲ့ အမူအရာတှေ လုပျပွခဲ့ပါတယျ။ အသကျ ၁၉ နှဈမှာ ထောငျကခြဲ့တဲ့ T.J Lane ဟာ အခုဆိုရငျ အသကျ ၂၃ ဝနျးကငျြရှိနပေါပွီ။
Related Article >>> ဟောလိုးဝငျးညရဲ့ လြှို့ဝှကျဆနျးကွယျ လူသတျမှု
ဒီလူငယျလေးကတော့ သူ့အသကျ ၁၆ နှဈမှာ ရဲအရာရှိတဈယောကျကို သနေတျနဲ့ အသပေဈသတျခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ယခငျကတညျးက ခိုးမှု၊ လုယကျမှု အသေးစားလေးတှေ ကြုးလှနျခဲ့ဖူးသူပါ။ ၂၀၁၁ ခုနှဈမှာ ကားတဈစီးကို ခိုးယူဖို့ ကွိုးစားနတေယျလို့ ရဲအရာရှိတဈဦးက သံသယရှိတာကွောငျ့ သူ့ကို စဈဆေးဖို့ ကွိုးစားစဉျမှာ သူက သနေတျနဲ့ ခုခံပဈခတျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၃ ခုနှဈမှာတော့ ဒီပွဈမှုကွောငျ့ သူ့ကို ထောငျဒဏျတဈသကျတဈကြှနျး ခမြှတျခဲ့ပါတယျ။
သူ့ရဲ့ ရှနေ့ကေ သူ့ရဲ့အပွဈဒဏျလြှော့ပေါ့ခံရဖို့ အကွိမျကွိမျကွိုးစားခဲ့ပမေဲ့ မအောငျမွငျပါဘူး။ Nicholas Lindsey လကျရှိမှာ အသကျ ၂၃ နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈပါတယျ။
ဒီ ဆယျကြျောသကျ နှဈယောကျကို မွငျလိုကျရငျတော့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ကလေးတှလေို့ အမြားက ယူဆကွမှာပါ။ တကယျတော့ သူတို့ဟာ အရှယျနဲ့မလိုကျအောငျ ရကျစကျတဲ့ပွဈမှုကွီးတဈခု ကြူးလှနျထားကွတဲ့ လူငယျတှဖွေဈပါတယျ။ ၂၀၁၂ ခုနှဈမှာ သူတို့နှဈဦးဟာ Antonio ရဲ့ အသကျ ၇၈ နှဈအရှယျအဖှားဖွဈသူကို ရဲဒငျးတှေ၊ တူတှေ နဲ့ ရကျရကျစကျစကျ ရိုကျနှကျခုတျထဈကာ သတျဖွတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုသတျဖွတျခဲ့ရတဲ့ ရညျရှယျခကျြကတော့ အဘှားဆီက လကျဝတျရတနာတှနေဲ့ ပိုကျဆံတှလေိုခငျြလို့ဖွဈပါတယျ။ နှဈရကျအကွာမှ ရဲတှကေ သူတို့နှဈယောကျသတျဖွတျတယျဆိုတာကို ဖမျးဆီးဖျောထုတျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျ သူတို့နှဈယောကျလုံးကို တရားရုံးက ထောငျဒဏျတဈသကျတဈကြှနျးခမြှတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> ရုပျရှငျကားတှေ နမူနာယူရိုကျကူးခံရတဲ့ စိတ်တဇလူသတျသမား အကျဒျဂိနျး
သူတို့ နှဈဦးကတော့ အသကျ ၂၅ နှဈအရှယျ Kenneth Campbell နဲ့အတူ အိမျတဈအိမျထဲ ဝငျရောကျကာ လူငယျတဈဦးကို သနေတျနဲ့ ပဈသတျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဖွဈရပျဖွဈတဲ့အခြိနျမှာ အသတျခံရတဲ့လူငယျ (Kadeem Johnson) ရဲ့ ခဈြသူကောငျမလေးကလညျး အတူရှိနပွေီး ဒီကောငျမလေးကိုတော့ ရငျဘတျနဲ့ လကျမှာ သနေတျဒဏျရာတှနေဲ့ တှခေဲ့ရပါတယျ။ ကောငျမလေးရဲ့ ထှကျခကျြအရတော့ ပွဈမှုကြူးလှနျသူ လူငယျတှဟော သူတို့ဆီက ပိုကျဆံအိတျနဲ့တကှ ဒျေါလာ ၃၀၀၀ ကို လုယကျသှားခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီပွဈမှုကို ကြူးလှနျခြိနျမှာ Jacob Mouzon ရဲ့ အသကျက ၁၇နှဈ ဖွဈပွီး Drake Campbell ရဲ့ အသကျကတော့ ၁၈ နှဈဖွဈပါတယျ။
ဒီပွဈမှုအတှကျ Kenneth Campbell ကို ထောငျဒဏျ တဈသကျတဈကြှနျး၊ Jacob Mouzon ကို ထောငျဒဏျ အနှဈ ၄၀ နဲ့ Drake Campbell ကို ထောငျဒဏျ အနှဈ ၂၀ ခမြှတျခဲ့ပါတယျ။
ဒီလူငယျတှေ ကြူးလှနျခဲ့တဲ့ ပွဈမှုတှကေ ကွီးလေးပါတယျ။ တကယျလို့ သူတို့သာ အရှယျရောကျပွီးသားဖွဈနရေငျ သဒေဏျခမြှတျခံရမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ ဥပဒအေရ တရားခံဟာ အသကျ ၁၈ နှဈအောကျဆိုရငျ သဒေဏျပေးလို့မရတာကွောငျ့ ထောငျဒဏျ တဈသကျတဈကြှနျးခမြှတျခံရတာပါ။
စိတျမကောငျးစရာတှပေမေဲ့လညျး သူတို့အသကျအရှယျနဲ့ ကြူးလှနျခဲ့တဲ့ ပွဈမှုတှကေို ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ဖွငျ့….
Tags: Crimes, Knowledge, Life Sentences, Murderer, Teens
Sugar Cane December 18, 2018